Soosaarka Shiinaha ee Cantilever Rack iyo Warshad | Huade
Rikoodhada Cantilever way fududahay in la rakibo oo la rogrogmi karo si loo kaydiyo culeysyo dhaadheer, culus oo aad u badan sida alwaax, tuubooyin, guntin, plywoods iyo wixii la mid ah. Qalabka Cantilever wuxuu ka kooban yahay tiir, saldhig, cudud iyo dhejis.
Rikoodhada Cantilever way fududahay in la rakibo oo la rogrogmi karo si loo kaydiyo culeysyo dhaadheer, culus oo aad u badan sida alwaax, tuubooyin, guntin, plywoods iyo wixii la mid ah. Qalabka Cantilever wuxuu ka kooban yahay tiir, saldhig, cudud iyo dhejis. Waxaa laga heli karaa hal dhinac ama laba dhinac.Cantilever rack wuxuu noqon karaa saddex nooc: nooca shaqada fudud, nooca shaqada dhexdhexaadka ah iyo nooca shaqada culus.
Si fudud loo isticmaalo, hore ayaa furan oo aan lahayn tiirar, u oggolaanaya rarka iyo dejinta dhaqsaha badan. Qalabka waxaa lagu keydiyaa oo lagu hagaajiyaa gacmaha dhinacyada forklifts ama wiishka wax lagu dhejiyo, taas oo yareyn karta foosha la xiriirta qarash bixinta.
Dhaqaale, Noocyadan noocan ahi waa qiimo jaban oo lumis yar. Waxyaabaha ugu yar ee ka hooseeya sariirta dhaqameed ee sagxadaha iyo dhammaadka furan waxay ka dhigan tahay in dhererka xamuulka kaydku uu kordhay iyada oo aan loo kordhin kharashka kaydinta Taasi waa xulashada dhaqaalaha.
Dabacsan, Ma jiro tiirar dheeri ah, rarka waxaa lagu dhejin karaa dhererka dhererka shelf shelf.
Xul ah, meelaha furan isla markiiba waa la aqoonsadaa.
La qabsan karo, Xargaha cantilever ayaa kaydin kara nooc kasta oo rar ah. Tani waxay keydineysaa waqti iyo kharash shaqaale.
Rikoodhada Cantilever waxay ka kooban yihiin afar qaybood
Saldhig, waxay taageertaa kuwa qumman iyo gacmaha culeyska saaran yahay. Saldhigga waxaa si ammaan ah loogu xiray sagxadda ama dabaqa hoose.
Toosan, ku xirmaan saldhig si ay u taageeraan hubka; gacmaha lagu toosin karaa on qumman.
Gacan, ka fidi kuwa qumman ee haya culeyska la keydiyay, waxay noqon karaan kuwo toosan ama ka koreeya xaglo kala duwan iyadoo loo eegayo shuruudaha alaabta la keydinaayo.
Jaangooyo / X xarig ah, ku xir xirmooyinka, adoo siinaya xasillooni, adkeyn iyo xoog.
Xakamaynta cantilever waxaa lagu soo ururin karaa bakhaar fara badan oo fara badan, inta badanna waxaa looga soo horjeedaa darbi hal dhinac ah iyo gadaal gadaal loogu laabo labada dhinac Booska u dhexeeya xaquuqda waxaa lagu hagaajin karaa inuu la jaan qaado gees kasta oo ka mid ah bakhaarkaaga si uu uga faa iideysto inta ugu badan ee bannaan.
Huade Cantilever Rack, doorashadaada ugu fiican.
Hore: Nidaamka Bakhaarka sariirtaada
Xiga: Rakibida Kartoonka